Mamorona lalao amin'ny Linux miaraka amin'ny Godot Engine | Avy amin'ny Linux
Fananganana lalao amin'ny Linux miaraka amin'ny Godot Engine
Ny ankamaroan'ny mpampiasa ny haitao dia mazoto ihany koa amin'ny lalao, amin'ny fitiavany, maro amintsika no manampy fandaharana. Saingy maro amintsika no mametraka ny tena tanjontsika, dia ny mamorona ny lalao ho antsika, ka izany no nahatonga ny mpamorona rindrambaiko maimaimpoana handray andraikitra amin'ny famoronana God Engine.
Manampy antsika io fitaovana matanjaka io mamorona lalao amin'ny Linux, izay azo ampitaina amin'ny rafitra fiasa rehetra, amin'ny fampiasana fitaovana maimaimpoana.
1 Inona no atao hoe maotera Godot?
2 Toetoetran'ny Godot Engine
3 Mametraka Godot Engine
4 Mametraha motera Godot, miaraka amina fampidirana rafitra sy mpitantana kinova ao amin'ny Ubuntu
Inona no atao hoe maotera Godot?
Izy io dia fampiharana an'ny loharanom-baovao misokatra y lampihazo miampita, izay manana endri-javatra mandroso ho an'ny Fampandrosoana lalao 2D sy 3D. Maotera Godot manambatra andiana fitaovana matanjaka manokana amin'ny famoronana lalao, izay manome antsika ny fahafaha-manao mamorona lalao amin'ny Linux tsy mila mila mamerina ny kodiarana.
Azonao atao ny mijery sy mandahatra ny kaody loharano Godot eto, izy io dia omena amin'ny fe-potoana tena mamela ny MIT Lisansa. Maimaimpoana koa izy io ary tsy mila karazam-panjaka hafa ianao.
Toetoetran'ny Godot Engine
Mpanonta sary tsara indrindra, miaraka amina fitaovana marobe, nampiana fampiasa madio sy milamina.
Fanontana lalao mivantana ho an'ny PC sy finday.
Fahaiza-manao fanovana 2D sy 3D.
Maotera 2D voatokana tanteraka.
Mpamily kinematika malefaka ho an'ny fifandonana raha tsy misy ny fizika.
Mpanafatra modely 3D avy amin'ny 3DS Max, Maya, Blende, sy ny hafa, ao anatin'izany ny sarimiaina rehetra.
Karazan-jiro maro karazana, misy aloky ny aloka.
Izy io dia mamela ny karazana sarimiaina 2D sy 3D isan-karazany, noho ny tanjany tonian-dahatsoratry ny sary mihetsika miaraka amin'ny fandaharam-potoana.
Ahafahanao manampy fitondran-tena amin'ny zavatra misy script efa niorina.
Godot dia miasa amin'ny Linux, Windows, OS X, FreeBSD, OpenBSD ary Haiku, mandeha 32-bit sy 64-bit izy, amin'ny sehatra rehetra.
Mamela anao hametraka lalao amin'ny sehatra samihafa mora sy haingana, ny tena zava-dehibe dia
Sehatra finday: iOS, Android, BlackBerry OS.
Sehatra birao: Windows, OS X, Linux, BSD, Haiku.
Tranonkala Web: HTML5 (amin'ny alàlan'ny emscripten).
Izy io dia fitaovana noforonina ary noforonina mba hiaraha-miasa, noho izany dia manana fahaizana mampifangaro amin'ny rafitra fanaraha-maso kinova malaza izy (Git, Subversion, Mercurial, PlasticSCM,…).
Io dia ahafahanao mamorona tranga isehoan-javatra, izay mahatonga ny fiaraha-miasa haingana sy mahomby kokoa, satria ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa dia afaka mifantoka amin'ny seho misy azy avy. Na inona na inona endri-tsoratra, sehatra, sns ... Izany hoe avela hanitsy tsy manitsaka ny tongotry ny hafa.
Maimaimpoana sy maimaimpoana tanteraka.
Mametraka Godot Engine
Azonao atao ny misintona ireo rakitra apetraka amin'ity rohy manaraka ity:
Server 64-bit Linux
Azonao atao koa ny misintona andiana santionany sy fampisehoana avy Eto.
Mametraha motera Godot, miaraka amina fampidirana rafitra sy mpitantana kinova ao amin'ny Ubuntu
Niklas Rosenqvist namorona script BASH izay misintona sy mampiditra ny motera Godot ao amin'ny Ubuntu. Izy io koa dia mamela ny fitantanana kinova sy mametraka git master.
Raha misintona sy mihazakazaka ny script dia sokafy console ary ampidiro ity baiko manaraka ity:
git clone https://github.com/nsrosenqvist/godot-wrapper.git godot && cd godot && ./godot apetraka
Ity script ity dia hampiorina ny Godot Engine anao ho azy. Jereo ny fiasa rehetra omen'ny script amin'ny alàlan'ny fihazakazahanagodot help.
Fitaovana tena tsara tokony hosedraina sy hianarantsika hampiasaina, indrindra ny famoronana lalao mifanentana amin'ny Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fananganana lalao amin'ny Linux miaraka amin'ny Godot Engine
Juan Quiroga dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana fa môtô tena tsara izy io, tsotra ny fampiasana azy, na dia mila zatra ny tontolo iainana aza izy ireo amin'ny voalohany, rehefa mandeha ny fotoana dia mahatsapa izy ireo fa ny lojika ihany (izay tokony hataon'ny motera tsirairay ).
Ny hevitro dia:
* Amin'ny antontan-taratasy, amin'ny teny anglisy ny ankamaroany (izay tsy dia manasaro-javatra firy) saingy tsy feno amin'ny antsipiriany araka ny tokony ho izy (indrindra ny miresaka momba ny 3D, tena mahantra ny antontan-taratasy), nefa hiaiky aho fa ireo 6 volana farany izay manitatra ary miakatra tsikelikely izy io; Na dia izany aza, ity teboka ity dia nohamafisin'ny fiaraha-monina kely, ny tsirairay dia mandray anjara ary tena manampy raha afaka ary mizara kaody tsy misy olana be loatra, na ao amin'ny forum, ao amin'ireo fantsom-pifandraisana misy olona sariaka.
* Amin'ny endri-dahatsoratry ny editor dia heveriko fa tsotra nefa mahery, mora tadidy ary manampy betsaka ny tonian-dahatsoratra.
* Ao amin'ny sary 2D dia lavorary izy, na dia amin'ny zavatra 2.5D aza dia mety, fa ny fampisehoana sary 3D dia ambany-ambany; Azo hatsaraina ary lasa azo ekena saingy mbola misy asa tokony hatao (nolazaiko fa tsy fampisehoana ny fampisehoana satria efa nandroso, ilaina ary tena tsara ho an'ny 2D sy 3D), izy ireo dia miasa miaraka amin'i Gles3, ilay motera sary 3D vaovao izay mihatsara kokoa araka ny nambara.
Famaranana: safidy tena tsara izany raha te-hampivelatra lalao multiplatform na fampiharana ianao ary hamonjy aretin'andoha anao, raha mbola mahay teny anglisy ianao (farafaharatsiny farafaharatsiny farafaharatsiny) ary mahalala ny resaka sy forum.
Valiny tamin'i Juan Quiroga
RobertC dia hoy izy:
Misy antontan-taratasy amin'ny Espaniôla. Azo sintonina amin'ny PDF, Epub, sns. Ao amin'ny http://godot-doc-en-espanol.readthedocs.io/es/latest/
Valiny tamin'i RobertC
Vao nahalala aho, misaotra betsaka anao noho ny tendrony!
Azonao atao izao ny mametraka ny kinova 2.2 alpha, izay mitondra fanatsarana sy fanamboarana mahaliana. Notsapaiko ary tena milamina izy io. OK daholo.
Malagueños voalohany sy afaka dia hoy izy:
Tena mahaliana, mila manaparitaka an'ity vaovao ity isika raha te hamporisika ireo mpandahatra fandaharana hampiasa fitaovana izay manao programa ho an'ny bibikely rehetra mandinika.
Ny fanohanana raspberry pi tsy hita fotsiny.
Valio ireo Malagueños voalohany sy afaka
Lalao Fan dia hoy izy:
Lahatsoratra mahaliana indrindra. Tonga tamin'ny alàlan'ny google aho ary ny fahamarinana fa tena nilaina tokoa. Hitako fa mahafinaritra ny lohahevitry ny tontolon'ny videogames sy ny famoronana azy.
Manantena aho fa afaka miditra lalina kokoa amin'ny lohahevitra ianao amin'ny lahatsoratra ho avy!
Valiny amin'ny Game Fan
Ahoana ny fametrahana Discord amin'ny Linux
Merry krismasy ary mendrika mendrika misaotra